Umad gumaysi ku jirta waxa ugu horeeya ee laga doonayo waa inay fahamto gumaysi wuxuu yahay. Taas ayaa u sahlaysa inay qiimayso xaaladda ay ku sugan tahay umadaasi inuu yahau mid gumaysi iyo inuu yahay mid xuquuq ka maqan.
Mudane M. ismaaciil isagoo arimahaa ka faaloonaya ayuu u kala qaaday cadaadiska ummad la cadaadiyo inuu yahay saddex (3) nooc:
3. Gumeysi ummad kale soo dul degay ( إستيطان – settler). Wuxuu gumeysiga noocan ah dafirayaa inuusan dalkan isagu lahayn oo uu shisheeye yahay. Wuxuu isa siiyay dadka iyo dalka iyo hantidoodaba. Wuxuu dafirayaa qaranimada ummadda uu qabsaday. Wuxuu ka beddelayaa jinsiyadooda oo tiisa ayuu ku qasbaa inay yihiin. Dadka gumeysiga noocan ah haysato iyaga oo la qaba dhibka labada nooc ee kale ayey u dheer tahay in jinsiyadoodii laga dafiro, dhulkoodiina lagala wareego. Si xaqooda loo duudsiyo waa inaan loo ogolaanin horukac dhinac aqooneed iyo dhaqaale. Waxaa lagala dagaalamaa baraaruga iyo inuu shacabkaasi yeesho tayo
Gumeysiga Itoobiya ay dadka Somalida Ogadenya gumeysato waa noocan saddexaad. Wuxuu dalka soo galay si joogta ah dhamaadkii Dagaalkii Dunida Labaad. Wuxuu yidhi dalka waa Itoobiya, dadkuna waa Itoobiyaan.
Wuxuu intaa raaciyay waxyaabaha ay ka midaysan yihiin dhamaan qaybaha gumaysiga, inuu yahay adeegsiga kooxaha iyo ashqaasta aan damiirka lahayn oo damiir xumo heerkay ka gaadheen aan ka diiraynin xataa haddii qoyskiisa la fara xumeeyo ama la laayo.
Maqaalkan aqoon kororsiga ah Halkan ka akhri.